Maalinta Cidul fidriga 2020 Waa maxay waxaa ay kaga duwan tahay …
Ciidul Fidriga (Ciidda Soonfur) waa kowda bisha Shawaal oo ah tan tobonaad ee Bilaha Hijriyada, waxaana la raadiyaa habeenka 29-aad ee Ramadaanka oo haddii la arko la furo Soonka, haddii la waayo bilashadeenada la buuxiyo 30-ka Ramadaan, balse iyada oo aan la baadi-goobin habeenka xiga takbiirta lagu dhawaaqo.
Sanadihii lasoo dhaafay diyaargarowga Ciidda waxa ay ka socotay Suuqyada oo lagu iibiyo Dharka, Agabka Carruurta ay ku dheelaan maalintaas, Waxyaabaha macmacaanka oo aad loo isticmaalo maalintaas, Magaalooyinka oo inta badan jidadka lagu xiro nalal iyo boorar muujinaya in maalin ciid la joogo, Goobaha dalxiiska oo la isugu sii diyaarin jiray iyo ehelada oo isa sii marti-qaadayo farxadda Munaasabadda ay uga wada qaataan hal guri oo ay isugu tagayaan.
Waxaa badnaa isugu socodka dadka oo ma jirin Feejignaanta laga muujinayo Cudurka Coronavirus oo saameyn taban ku yeeshay Ciidda iyo diyaargarowga, halka dhaqaalaha dalalka kala duwan ee caalamka uu hoos u dhacay.
Carruurtu oo ah udub dhexaadka farxadda iyo damaashaadka Ciidda ayaa kol hore laga fasaxay Goobaha Waxbarashada, waxaana adag in ehelkooda xitaa ay u tagaan cabsi laga muujinayo faafitaanka xannuunka oo si fudud la isugu gudbiyo.
Ciidda Soonfur 2020 maxaa ku cusub?
Sanadkaan waxa ay Ciidda kusoo beegantay iyada oo aan la keenin dharkii badnaa, sabab la xiriirta xannibaadda dalalka kala duwan ee Caalamka, balse shirkadaha qaar ayaa keenay dhar kooban, halka dadka qaar laga iibiyay dharkii hore u yaallay suuqyada sida Ganacsada dharka iibisa ay Mustaqbal u sheegeen.
Goobaha macmacaanka lagu sameeyo oo dalabaadkoodu bilawdo bartamaha Bisha Ramadaan sanadkaan waxaa yaraa dadka geysanaya waxyaabaha laga sameeyo, sababo dhaqaale xumo iyo isugu socodka habeenkii oo joogsaday, maadaama bandow 8-da Fiidnimo bilaabanaya Dowladdu soo rogtay.
Salaadda Ciidda oo lagu tukado Masaajidda waa weyn ee Caasimadda, Goobaha Fagaaraha ah iyo Barxadaha, Wasaaradaha Caafimaadka iyo Awqaafta iyo arrimaha diinta XFS waxa ay sheegeen in aan goobahaas lagu tukaneen, maadaama laga fogaanayo kulanka bulshada.